Lesoka Nataon’i Etazonia Momba an’i Okraina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Avrily 2014 16:59 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, srpski, Italiano, 繁體中文, 简体中文, македонски, Български, Svenska, English
Ireo lesoka nataon'i Etazonia tamin'ny adim-baovao momba an'i Okraina. Sary namboarin'ny mpanoratra.
Henjana ny toe-draharaha any Okraina atsinanana, ary efa misidina ny bala voalohany amin'izay mety ho ady fifanandrinana goavana. Mety vao miandoha ny herisetra, fa efa nahery vaika am-bolana maro izay ny adim-baovao eo amin'i Rosia sy ny Tandrefana. Niampanga an-karihary ny propagandy rosiana, tamin'ny 13 avrily lasa teo, ny Departemantam-Panjakan'i Etazonia, raha namoaka ny lisitra folon'ny “filazana diso momba an'i Okraina” notenenin'i Kremlin. Efa namoaka lisitra mitovitovy amin'izany ihany ny governemanta Amerikana tamin'ny volana lasa teo, tamin'ny 4 marsa, raha nitsikera ny fomba filazan'ny Rosiana momba an'i Krimea.
Ny tena mandray ny “fitaovam-propagandy Rosiana” indrindra, araka ny iantsoan'ny Departemantam-Panjakana, dia tsy isalasalana fa ny vahoaka Rosiana ihany. Nasehon'ny manampahefana ao Etazonia fa tsy miraharaha loatra ireo mpiteny rosiana ry zareo, fa namoaka ireo lisitra ireo tamin'ny teny anglisy ihany. Hita fa toa tsy misy ny dikany teny rosiana amin'ny fomba ofisialy an'ilay fanambarana an-gazety, na dia maro aza ireo fampitam-baovao namehy ny lahatsoratra amin'ny teny Rosiana sy Okrainiana. Ny kaonty Twitter ofisialin'ny Masoivohon'i Etazonia any Rosia, izay manana mpanjohy mihoatra ny 21.000, dia namoaka ny rohin'ny “filazana diso folo,” fa 15 monja ny olona ni-retweet.
Tsy dia nahagaga loatra, noho ny tsy fahitana ny tahirinkevitra amin'ny teny rosiana, raha tsy nahazoana setriny avy amin'ny Rosiana ny fanambarana ny filazana fandravalainga navoakan'ny Departemantam-panjakana. Raha niteraka fampitana lahatsoratra vitsivitsy avy amin'ny Twitter sy ny tambajotra an-tserasera hafa ny fintina nataon'ny gazety rosiana momba ny filazana an-gazety nataon'i Etazonia, dia hita ankitsirano fa nihivingivin-doha nitsipaka ny Rosiana bilaogera. Maro amin'ny tsikaritra no mifantoka amin'ny sompiran-teny nataon'ny Departemantam-Panjakana fa mavitrika ny “Rosiana mpitsikilo” ao Okraina. Ao amin'ny efa lasa adihevitra andavanandro momba ny fiavian'ireo mpiady, dia tsy mitsahatra ny mamotopototra lalina amin'ny sary ireo lehilahy mitam-piadiana any an-tanandehibe Okrainiana ny bilaogera, miady hevitra raha mamoaka ny momba ilay olona tokoa ny basiny, ny akanjo amboniny, ny satrobìny na izay zavatra hafa ahafahana mamantatra azy.
Amin'ireo Rosiana mpiserasera Internet mitsipaka ny fanehoan-kevitry ny Departemantam-Panjakana, dia tsy niraharaha izay votoatin'ny tatitra akory aza ny ankamaroany, fa niahiakiaka amin'ny fihoara-pahefana ataon'ny governemantan'i Etazonia amin'ny ankapobeny. “Mana-talenta mahatalanjona [amin'ny fahaiza-mandainga] ny fahavalo,” hoy ny iray ao amin'ny LiveJournal. “Fa ahoana ny lohan'ny Departemantam-Panjakana no feno diky?” hoy ny fanontanian'ny mpisera Facebook iray. “Mandainga ry zareo isaky ny misefo [miaina],” hoy ny iray hafa nanoratra, ary nampiany hoe, “So aloha fa nangina ny antsika [ao amin'ny governemanta rosiana], fa mandainga ireo olona [Amerikana] ireo.” Nisy bilaogera iray ao amin'ny LiveJournal nilaza hevitra tao amin'ny fanambarana an-gazety nataon'ny Departemantam-Panjakana tamin'ny fandresen-dahatra fa kely dia kely ny porofon'ny fidirana an-tsehatra ataon'ny Rosiana any Okraina, raha ataha amin'ny (lazaina) ho fisavovon'ny tahirin-kevitra mampiseho ny andraikitr'i Etazonia amin'ny fitomboan'ny famokarana rongony (opium) Afghan. Noho izay antony izay, hoy ny filazany, dia “ny fanasaziana an'i Etazonia no azo heverina bebe kokoa noho ny fanomezan-tsazy an'i Rosia.”
Diso paika ihany ny serasera nataon'ny governemantan'i Etazonia amin'ireo mpiteny rosiana faraparany teo, izay no farafahakeliny azo lazaina. Tamin'ny 8 avrily 2014 ny ambasadin'i Etazonia nisioka (ni-tweet) rohy manondro tantara avy amin'ny haba-tranonkalan'ny Akon'i Moskoa momba ny mpisintaka any Kharkov nanafangaro ny lapa fanaovana opera amin'ny lapan'ny ben'ny tanàna. (Ny fahadisoana, araka ny tati-baovao, no mampiseho fa tsy olona avy ao an-toerana ireo olona ireo, toy ny midika fa misy ny fidirana an-tsehatry ny avy any ivelan'ny firenena.) Nampian'ny ambasady diezy tokony hanoratra hoe “fanokana-monina an'i Rosia” ny siokantserasera (tweet), saingy diso ny nanoratany ny voambolana “Rosia.” Nahagaga, tsy nisy namafa ny tweet. (mbola an-tserasera ary hita androany). Tao anatin'ny ora vitsivitsy, namoaka tao amin'ny Facebook ny sarin'ilay fahadisoan-tsipelina ny minisiteran'ny raharaham-bahiny rosiana, maneso ilay fahadisoana ary manolo-tena hanampy amin'ny “fanaovana propagandy” rahampitso na rahafakampitso.
Hatramin'izao fotoana izao, ny latsabaton'ny sampan-draharaha iraisampirenena momba ny fampiraisana amin'i Krimea dia manondro fa manakaiky kokoa amin'i Okraina sy Etazonia ireo firenena fa tsy amin'i Rosia. Fa raha itodihana kosa ny Rosiana olom-pirenena tsotra, dia mampahonena loatra ny adim-baovao ataon'ny Amerikana.
Soratra miverina: Nohamorain’i Etazonia Indray Ny Fanaovan’i Kremlin Propagandy · Global Voices teny Malagasy
[…] kokoa ny naka fahanginana kely taorian'ny tsy fahombiazan'ny diplaomasian'i Etazonia tamin'ny fifandraisana tamin'ny Rosiana o… [tatitra Global Voices amin'ny teny malagasy], rehefa tojo tsy fahombiazana miharihary tahaka izao […]
26 Avrily 2014, 01:04